आइतवार, माघ ११, २०७७
अक्षयको ‘बच्चन पाण्डे’को लुक देखेर चकित बने फ्यान !
नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २ हजार नाघ्यो
डिनलाई विद्यार्थीको खुलापत्र
३८ मिनेट अगाडि
विवाह बन्धनमा बाँधिए वरुण-नताशा
दुईवटा किड्नी फेरेर मैले विश्वमा नयाँ रेकर्ड राखे : प्रधानमन्त्री ओली
लजमा सँगै बसेका देवर–भाउजू मृत भेटिए !
जनगणना गर्नको लागि तथ्यांक विभागले माग्यो गणक तथा सुपरिवेक्षक
४९ वर्षीय तब्बुले खोलिन् बिहे नगर्नुको कारण !
सुस्मिताको त्यो बोलीले म छाँगाबाट खसें
# गगन थापा
# करिश्मा मानन्धर
# वर्षा शिवाकोटी
# स्वस्तिमा खड्का
# अदिती बुढाथोकी
२०७७ साल मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष पुष ७ गते मंगलवार अष्टमी तिथि उत्तरभाद्रपद नक्षत्र चन्द्रमा मीन राशिमा ।
Image Credit : www.ktmdainik.com
शत्रु पराजित हुने समय छ । ज्ञान विज्ञानका कुरा सिक्छ पाइनेछ । मानसिक सन्तुष्टि पनि मिल्ने दिन रहेको छ । कृषि तथा कृषिकार्यसंग सम्बन्धित व्यवसायबाट लाभ होला । आर्थिक आम्दानी हुने विभिन्न अवसर आउनेछन । पारिवारिक सहयोग भन्दा इष्टमित्रको सहयोग प्रभावकारी हुनेछ । पढाइ लेखाइबाट पनि राम्रै प्रगति गर्न सकिने दिन छ ।
तपाईंको कुरा काट्ने मान्छेहरु आज प्रशस्त हुनेछन् त्यसैले धेरै सावधान रहेर कामहरु गर्नु पर्ने देखिन्छ । मनसिक चिन्ता बढ्न सक्छ, त्यसले तपाईंको अध्ययन अध्यापनमा पनि हानि पुर्‍याउला । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा भने लाभदायक दिन छ । त्यस्तै तरल पदार्थको काममा पनि प्रसस्त लाभ मिल्ने देखिन्छ ।
पठन–पाठनमा भने त्यत्ति मन नजाला, व्यापारमा प्रशस्त मुनाफा हुने देखिन्छ । अन्य काममा लगाव बढ्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यमा खरावी देखिएला त्यसैले खानपिनमा सावधानी अपनाउनु भए राम्रो होला । आज तपाईंले प्रेममा सुखद मिलनको अनुभव गर्न सक्नु हुनेछ ।
आज तपाईले रमाइलो तरिकाले कामहरु गर्न पाउनु हुने छ । विपरित लिङ्गिको हौसलाले पनि तपाईंमा जोश र जागर बढ्ने देखिन्छ । मध्यान्न पछि अरुको काममा समय दिएर खुशी रहनु हुनेछ । बोलीको प्रभाव रहनाले राजनीति क्षेत्रमा प्रगति होला । प्रेम प्रसङ्गमा भने बिछोडको सामना गर्नु पर्ला ।
काममा बाधा अड्चन आउने सम्भावना रहेकाले धैर्यता पूवर्क काम सम्पन्न गर्नु होला । नयाँ किसिमका कामहरुमा भने केही समस्या देखिन सक्छ । शरीरमा चोटपटक लाग्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । गरिराखेको पेसाबाट मन अघाएर नयाँ काम तिर मन जाला । बौद्धिक तथा रचनात्मक कामबाट मानसिक सन्तुष्टि मिल्ने छ ।सामान्य भर्दा पनि सामान्य ब्यक्तिबाट उचित सहयोग प्राप्त होला ।
आज तपाईंले सामाजिक काममा समय दिनु पर्ने देखिन्छ । आफूले गरेका कामहरुबाट खुशी नमिल्ने देखिन्छ । ठूलो लगानी र योजनाको काममा सहभागी नभएकै बेश होला । स्वास्थ्यमा पनि सामान्य खराबी आउनसक्छ । हरेक कुरामा ढिलासुस्ती हुने देखिन्छ । समयको सदुपयोग गर्न तर्फ बडो सहक रहनु पर्ने देखिन्छ ।
धार्मिक कार्यमा खटिनु पर्ला । आफ्नो कर्मलाई लिएर उचित मूल्याङ्कन हुने समय आएको छ । लामो समयदेखि नबनेको काम सम्पन्न हुने देखिन्छ । स्वास्थ्यमा सामान्य खराबी आउनसक्छ । सिर्जनशिल काममा लगाव बढ्ने देखिन्छ ।
परिश्रम गर्ने समय आएको छ । आज अरुले पनि तपाईंलाई साथ सहयोग गर्नेछन् । दीर्घजीवनका लागि फलदायी दिन रहला । मन पनि रमाउने छ । मौसममा आएको परिवर्तनले स्वास्थ्यमा केही समस्या देखा पर्न सक्छ, त्यसो त चिसोबाट हरबखत नै सजग रहनु पर्नेछ । परिश्रम गर्नसके लाभ लिन सकिने समय छ । बौद्धिक तथा रचनात्मक क्षेत्रतर्फ पनि रुचि बढ्ने देखिन्छ । व्यवसायिक क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ भइरहला ।
तपाईंले आज हर समय सजग रहनु होला । अधुरा कामहरु पनि अधुरा नै रहलान् जस्तो छ । संयमित भइ आफ्नो गतिविधि बढाउनु होला । नचिनेका व्यक्तिसित नयाँ मित्रता कायम होला । जग्र्गा जमिनको कारोबार भन्दा जागिरबाट राम्रै प्रगति हुने देखिन्छ । मानसिक परिश्रम बढी गर्न पला । समयको सदुपयोग गर्न तर्फबडो सहज रहनु भउ आम्सिक रुपमा राम्रो होला । कर्मचारी वर्गका लागि भने फलदायी दिन रहेको छ ।
विपरित लिङ्गिको हौसलाले तपाईंका कामहरु सजिलै संग बन्नेछन । आर्थिक पक्ष राम्रो छ, व्यापार वा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरुले मनग्गे लाभ लिन सक्दछन् । धार्मिक ठाउँको रमाइलो यात्रामा सरिक हुन अवसर मिल्नेछन । स्वास्थ्यमा भने केही खरावी देखिन सक्छ, त्यसैले खानपिनमा सावधानी अपनाउनु होला । प्रेम प्रसंगमा खासै राम्रो समय छैन मनमुटाव हुन सक्ला ।
तपाईंका लागि मंगलबारको दिन निकै राम्रो रहेको छ । पठन–पाठनमा मन जाने देखिन्छ । कठिन यात्रामा भने सरिक हुनुपर्ला । मन परेको सामग्री किन्नमा ठूलै रकम खर्च हुने पनि देखिन्छ । आफन्तजन संग पनि भेटघाट व्यस्त भइएला ।
आजको दिन तपाईंका लागि मध्यम खालको छ । कामको बोझले थाकेको महसुस होला । आजको दिन आर्थिक कारोबार नगरेकै राम्रो । प्रेम प्रसंगको कुरा गर्दा, आज तपाईंको प्रेम प्रसंग सुखद रहने छ ।
कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिकृयाको लागि [email protected] मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।
मोटाएपछि झनै ‘हट एण्ड सेक्सी’ बनिन् खुशी हेरौं १८ तस्विरहरु
आमा बनेपछि पहिलो पटक सार्वजनिक भइन् अनुष्का !
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो
फेरि घरभित्रै मृत अवस्थामा भेटिए श्रीमान् श्रीमती !
धेरै पढेका १० हिराेहरू, कुन हिराेले कति पढेका छन् ?
यी ३४ सपना, जस्ले धन प्राप्तीको संकेत गर्छन् !
२०२१ मा चम्किँदै यी ६ राशिको भाग्य
ठूलो नि’तम्ब भएकै कारण करौडौं कमाउने एन्ड्रिया हेर्नुहोस् तस्विरहरु
१८ तस्विरमा हेरौं नायिका स्वस्तिमा खड्काको भुतुक्कै बनाउने सारी अवतार
श्रीमान श्रीमतीबीच मनमुटाब भइरहन्छ भने बेडरुममा यी कुराहरु नराखेकै राम्रो ?
हट एण्ड सेक्सी बनेर देखिइन् ‘काउलीबुढी’, हेर्नुहोस् ८ तस्बिर
हनिमुनमा हुँदा काजल अग्रवालले सेयर गरेका मनै लोभ्याउने २० तस्विर…
थाइल्याण्डका राजाकी प्रेमिकाको आफैंले नै खिचेका सयौं न’ग्न फोटो ‘लि क’
किड्नी बिगार्ने मानिसको एउटा यस्तो बानी : समयमै जानकारी लिनुहोस
बलिउड तथा साउथ हिरोहरूलाई टक्कर दिने नेपाली हिरो [फोटो फिचर]
मनिषा कोइरालाको घर कुनै राजमहल भन्दा कम छैन ( २० तस्विरमा हेर्नुहोस )
कुन बार जन्मिएको मानिसको भविष्य र आचरण कस्तो हुन्छ ?
पैसा कमाउन मलेसिया पुगेका १८ जना बाकसमा फर्किए ! हृदयविदारक तस्विरहरु
कुन भागमा टाउको दुख्नु के रोगको संकेत ? खतराको घण्टी बज्नुअघि पढ्नुहोस !
कपाल झर्ने कारण र रोकथाम बारे डाक्टर प्रकाश आचार्यको सुझाब
ओलीले पूर्व जनमुक्ति सेनालाई बालुवाटार बोलाएर भने -‘विगतको नेतृत्वजस्तो धोका हुँदैन’ !
संकटाको दर्शन गर्दै आज शनिबारको राशिफल पढ्नुहोस
भोली बिहिबार विष्णु भगवानको दर्शन गर्दै राशिफल पढ्नुहोस !
माघ ७ गते बुधबार यी पाँच राशिहरुको लागि अत्यन्तै शुभ !
भोली मंगलबार समस्याको निवारक श्री गणेशको दर्शन गर्दै राशिफल पढ्नुहोस
श्री स्वस्थानी माताको दर्शन गर्दै, माघ १० गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल पढ्नुहोस
माघ ४ गते आइतबार, यी ६ राशिको लागि राम्रो
प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक युवाको खुला पत्र !
आर जी पाण्डे
मैले देखेको काङग्रेस…
बुधबार, पुस २९, २०७७
भू–राजनीतिक गोलचक्कर भित्र रुमलिएको नेपालको अर्थ व्यवस्था
डा. उत्तम खनाल/अर्थ राजनीतिक विश्लेषक
आइतवार, पुस २६, २०७७
ताजा अपडेट धेरै पढिएको
दुखद खबर : कोरोनाका कारण विदेशमा थप नौ नेपालीको निधन
भोली नेपाल बन्द !
पथलैया-अमलेखगञ्ज सडकमा पिसाव फेर्न जंगल पसेका पुरुषलाई बाघले तानेर लग्यो
यमराज बन्दै टिपर : बाटामा हिडिरहेकी १८ वर्षीय अन्सुको निधन !
४९ वर्षमा बेहुलो बनेका शेरधनका बिहेका तस्विरहरु बाहिरिए…
एन. पी संचार प्रालिद्वारा सञ्चालित
सूचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता नम्बर : १९१३/०७६-७७
सिंहदरबार पूर्वी गेट अगाडी
सारा भवन दोस्रो तला, अनामनगर काठमाडौं
मोबाइल नम्बर : ९८५११८६९९३
प्रदेश १ प्रमुख
दीपबहादुर बडुवाल (दीपक)
बाल गोपाल देवकोटा
देवी प्रसाद ओली
ज्योतिष : जिवन पौडेल
© copyright 2021 and all right reserved to Ktm Dainik | Design By : SobizTrend Technology Hosting by : Hamro Hosting